Ch 16 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 16 Matthew
16:1 Ary ny Fariseo sy ny Sadoseo nanatona azy mba hizahany toetra azy, ary izy ireo nangataka Azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra.
16:2 Fa izy namaly ka nilaza taminy: "Rehefa hariva ny andro tonga, hoy ianao:, 'Ho tony tsara ny andro, fa ny lanitra dia mena,'
16:3 ary nony maraina, 'Ankehitriny dia hisy oram-baratra, fa ny lanitra fa mena sy mahakivy. 'Koa dia, anao hahafantatra ny fomba hitsara ny endriky ny lanitra, fa tsy afaka hahalala ny famantarana ny fotoana voatondro?
16:4 Ratsy fanahy sy mijangajanga taranaka mitady famantarana. Ary famantarana; nefa tsy hisy homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona. "Dia nandao azy aoriana, dia lasa nandeha.
16:5 Ary raha ny mpianany dia nita ny ranomasina, dia nanadino hitondra mofo.
16:6 Ary hoy Izy taminy:, "Jereo aho ka tandremo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo."
16:7 Fa izy kosa no nihevitra-pony ireo, nanao hoe:, "Satria efa tsy nitondra mofo."
16:8 Avy eo Jesosy, fantany izany, nanao hoe:: "Nahoana ianao no mihevitra anakampo, Ry kely finoana, fa satria tsy manana mofo?
16:13 Ary Jesosy niditra teo an faritanin'i Kaisaria-filipo. Ary nanontany ny mpianany, nanao hoe:, "Iza no olona milaza fa ny Zanak'olona?"
16:14 Ary hoy izy ireo:, "Ny sasany: Jaona Mpanao-batisa, ary ny sasany: Elia, Mbola hafa hoe i Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. "
16:15 Hoy Jesosy taminy:, "Fa iza no milaza fa Izaho no?"
16:16 Simona Petera namaly hoe:, "Ianao no Kristy, ny Zanak 'Andriamanitra velona. "
16:17 Ary ho setrin'ny, Fa hoy Jesosy taminy: "Sambatra ianao, Simona zanak'i Jaona. Fa tsy nofo aman-drà no naneho anao izany, fa ny Raiko, Izay any an-danitra.
16:18 Ary lazaiko aminareo, fa ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny Fiangonana, ary ny vavahadin 'ny helo tsy haharesy azy.
16:19 Ary homeko anao ny fanalahidin 'ny fanjakan' ny lanitra. Ary na inona na inona fehezinareo etỳ ambonin'ny tany dia hofehezina, na dia any an-danitra. Ary na inona na inona dia hafoinao etỳ ambonin'ny tany dia ho afaka, na dia any an-danitra. "
16:20 Avy eo dia nampianatra ny mpianatra Izy mba tsy hilazalaza amin'olona fa Izy no Jesoa ilay Kristy.
16:21 Ary tamin'izany andro izany, Jesosy nanomboka, ny nanambara tamin'ny mpianany fa tsy maintsy ho azy hankany Jerosalema, ary hijaly be avy amin'ny anti-panahy sy ny mpanora-dalàna sy ny mpitarika ny mpisorona, ary mba hovonoina, ary ny hitsangana indray amin'ny andro fahatelo.
16:22 Ary Petera, nitondra an-dralehilahy nitanila, niteny mafy azy, nanao hoe:, "Tompo ô, Mety ho lavitra anao; izany dia tsy tonga ho anao. "
16:23 Ary miala, Hoy i Jesosy tamin'i Petera: "Mankanesa ato ivohoko, Satana; ianao no sakana ho ahy. Fa tsy fihetsika araka izay avy amin'Andriamanitra, fa araka izay ny olona. "
16:24 Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: "Raha misy vonona ny hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany, ka hanaraka Ahy.
16:25 Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery izany;. Fa na iza na iza no namoy ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany.
16:26 Fa inona no soa ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, nefa tena mijaly simba ny fanahiny? Fa inona no homen'ny olona ho takalon 'ny ainy?
16:27 Fa ny Zanak'olona dia ho tonga amin'ny voninahitry ny Rainy, mbamin'ny anjeliny. Ary dia hamaly ny tsirairay araka ny asany.
16:28 Amen Lazaiko aminareo, misy ny sasany eo amin'izay mijoro eto, izay tsy mba hanandrana fahafatesana, mandra-pahitany ny Zanak'olona tonga fony izy mbola nanjaka. "